Dowladda iyo IFC oo heshiis Zoom ku kala saxiixday | KEYDMEDIA ONLINE
Dowladda iyo IFC oo heshiis Zoom ku kala saxiixday
Sida uu shaaca ka qaaday wasiirka wasaaradda maaliyadaa xukuumadda xil gaarsiinta ah ee Soomaaliya waxay heshiis la saxiixatay Soomaaliya hay'ad caalami ah, kaddib kulan muhiim ah oo ay ku yeesheen aaladda fogaan aragga ee Zoom -ka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Wasiirka maaliyadda xukuumadda xil gaarsiinta ah ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa ka qeyb galay shir muhiim ah oo ka dhacay aaladda fogaan aragga ee Zoom ka kaasoo uu sheegay in uu heshiis maalgashiga ku saabsan kala saxiixdeen hay'ad caalami ah oo maalgashiga iyo ganacsiga u qaabilsan Bangiga adduunka.
"Maanta waxa aan heshiis la saxiixnay Hey'adda Maalgashiga iyo Ganacsiga u qaabilsan Bangiga Adduunka ee #IFC heshiis kaasi oo lagu taageerayo horumarinta ganacsiga gaarka loo leeyahay ee Soomaaliya iyo gacan ka geysashada sidii fursado waara loogu abuuri lahaa bulshada Soomaaliyeed" ayuu yiri wasiir Bayle.
Waxa uu intaa ku daray wasiir Bayle "Horumarinta ganacsiga gaarka loo leeyahay waxaa uu muhiim u yahay isbeddelka dhaqaalaha dalkeena, sidoo kale Waxaa naga go'an in aan sii wadno dadaalada dib u habaynta hanaanka Maaliyadda iyo dhaqaalaha si aan iskaashi maalgashi iyo mid taageero dhaqaale u la yeelano Hey'addaha kala duwan ee Maaliyadeed ee caalamka."
Dowladda uu hoggaamiyo Farmaajo ee muddo xileedkeedu dhammaaday ayaa waxay ku faantaa in ay fuliyeen waxyaabo badan oo horumar ah kuwaasoo ay kamid tahay Deyn cafin, iyo in ay heshiisyo caalami ah la saxiixdeen hay'ado ay kamid yihiin tan lacagta ee IMF -ta iyo Bangiga adduunka.
Heshiisyadaasi intooda badan waa kuwo ay sheegato dowladda Farmaajo, inkastoo ay dhici karaan heshiisyadaasi, haddana waxaa la is weydiin karaa ma yihiin heshiisyo wax-tar u leh bulshada Soomaaliyeed, mise waa dacaayad iyo faan ay xukuumadda xil gaarsiinta ah rabto in ay ku faanto.